संसारका सबैभन्दा महंगा कार कुन कुन हुन् त ?
गाडीभित्र पनि कारको कुरो अलग छ । कसलाई रहर हुँदैन र आफ्नो पर्सनल एक कार होस् , परिवारको साथ कुनै लामो यात्रामा त्यसमा सफर गरुँ भन्ने, कसको मनमा विचार आउँदैन आफ्नी प्रेमिकाका साथ कुनै एकान्त सडकमा कारमा हुँइकिदै कुनै सुन्दर रमणिय ठाउँमा डेटिङ हिँड्ने
सन् २०१६ मा वार्डस इन्टिेलिजेन्सले सार्वजिनिक गरेको पछिल्लो डाटा अनुसार संसारमा बस, कार र ट्रक सेग्मेन्टका मात्रै पनि १.३२ बिलियन गाडीहरु रहेका थिए । जुन साबिकको वर्षमा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि थियो । वार्डस इन्टेलिजेन्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०४० मा यसको संख्या डबल पुग्नेछ । त्यही वृद्धिदरको आधारमा पनि अहिले संसारमा कम्तीमा १.३८ बिलियन सो सेग्मेन्टका गाडी रहेका छन् । यो त भयो संसारमा द्रूत गतिमा भईरहेको गाडीको विकाश र यसले छोटो समयमा हरेक व्यक्तिको मन,मुटु र हृदयमा जमाएको डेराको प्रसंग । तर गाडी किन युज गर्ने त ? व्यक्ति तथा वस्तुको ट्रान्सपोटेसनको लागि ? त्यति मात्र होइन, टान्सपोटेसनको कामका लागि कल्पना गरि निर्माण गरिएको गाडी अहिले शोखको साधन पनि भइसकेको छ । गाडीभित्र पनि कारको कुरो अलग छ । कसलाई रहर हुँदैन र आफ्नो पर्सनल एक कार होस् , परिवारको साथ कुनै लामो यात्रामा त्यसमा सफर गरुँ भन्ने, कसको मनमा विचार आउँदैन आफ्नी प्रेमिकाका साथ कुनै एकान्त सडकमा कारमा हुँइकिदै कुनै सुन्दर रमणिय ठाउँमा डेटिङ हिँड्ने ? को भन्छ पैसाले खुसी किन्न सकिदैन ? जब कोही कुनै ब्यस्त सडकमा लक्जरी कारमा कावा खाँदै पौडिन्छ त्यो भन्दा गुलियो सुखको पल के होला र अरु ? आज हामी तिनै विलासिनताका लागि निर्माण भएका संसारका महंगा कारको विषयमा कुरा गछौंै । संसारका सबैभन्दा महंगा कार कुन कुन हुन् त ? कति छ तिनको मूल्य ? आउनुहोस् जानिराखौं संसारका महंगा दश कारको बारेमा ।
१. कोइनीग्जेज सिसिएक्सआर ट्रेविटाः यो कारको मूल्य ४.८ मिलियन डलर रहेको छ । जुन जेबिआरको एक अपार्टमेन्टभन्दा महंगो हो । यसमा प्रयोग भएको कोइनिग्जेज प्रोपेटिक डाइमन्ड वेभले युनिक फाइबर सोलुसन गर्ने काम गर्दछ । जसले फाइबरलाई ब्ल्याक देखि रिलिङ्ग राइट ह्वाइट बनाउँछ । यसमा कोइग्निज इक्विप्पेड रहेको छ जुन ४.८ लिटर क्यापासिटीको रहेको छ । यस कारका दुईवटा मोडेल मात्र बनाइएका छन् भने यो कार विशेष टेक्नोलोजीमा पृथक शैलीमा उत्पादन गरिएको छ ।
२. लम्बोर्घिनी भिनेनो रोडस्टर ः लम्बोर्घिनी भिनेरोको मूल्य ४.५ डलर राखिएको छ । यो कार6.5 lt V12 इन्जिनको विशेष उत्पादन हो जसले २.९ मिलिमिटरमा ६० माइलसम्मको माइलेज दिन्छ । यो आइकोनिक कारको एड्रेन्यालिनी जंकमा उच्च पावर र आर्कषक लुक्स रहेको छ । यसको अर्को विशेष विशेषता के हो भने सडकमा यात्रा गर्दा यो भित्र यात्रुले आकाशमा उडेको जस्तो अनुभूति गर्दछन् ।
३. लिकन हाइपरस्पोर्ट ः यो कार फस्ट अरब स्पोर्टस कारको रुपमा पनि परिचित छ । यसको प्रत्येक एलइडी हेडलाइटहरुहरुको डिजाइनमा बहुमूल्य पत्थर तथा हिरा छनोट गरिएको छ । यो कार अमेरिकन एक्सन मुभी फिचर ७ मा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । यसको अंकित मूल्य ३.४ मिलियन डलर राखिएको छ ।
४. बुगाती भेरोन ः यो म्यानसोरी विवेरेको सिमित संस्करणको कार हो । यसको मूल्य ३.४ डलर रहेको छ । यसलाई सन् २००५ मा सर्वप्रथम निर्माण गरिएको थियो भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा सयौं पल्ट परिमार्जन गरिसकेको छ । कार अनियमित कार्वन फायरको रुपमा निर्माण गरिएको छ र हेडलाइट्स र टाइलाइटाइट क्लस्टर निरन्तर अपग्रेड गरिएको छ ।
५. एस्टन मार्टिन भल्किरी ः मिलियन भल्करी एस्टन मार्टिनको पहिलो हाइपरर यो कार निःसन्देह एकदमै उत्तम कार हो । यो रेड बुल एम–आरबीको अपग्रेडेड संस्करण हो । डिजाइन,स्ट्रक्चर र टेक्नोलोजीको आधारमा यो एक रेसिङ्ग कार हो भने यसको मूल्य ३.२ मिलियन रहेको छ ।
६. फरारी पिनीफेरिना सर्जियो ः ३ मिलियन डलर मूल्य रहेको यो कार संसारको सबैभन्दा उच्च प्रतिस्थित कारमध्येको एक हो ।यो कार पिनिनफेरिनाले आफ्नो छोरा पिनिफेरिनाको सम्झनामा बनाएका थिए । यो फरारी ४५८ को अपग्रेडेड भर्जन हो । यो कारको एक रोचक तथ्य के छ भने यो कारलाई विशेष सुपर बनाउन गाडीका मालिकहरुले आफै आफैले पैसा उठाएर निर्माण गरेका थिए ।
७. पगनी हरया बीसी ः पगनी होरया नामक ओमान देवताको नाममा यसको नामाकरण गरिएको थियो । यसको एक विशेष विशेषता के हो भने यसले १५० मिलिसेकेन्ड देख ७५ मिलिसेकेन्डसम्म गति सीमित एरियामा गती कम गर्दछ । यसको मूल्य २.८ मिलियन डलर रहेको छ ।
८. फरारी लाफरारी एपेराटाः यो कम्पनीले आफ्नो ७० औं वार्षिक समारोहको अवसर पारि लन्च गरेको कार हो । यो ला फेरारीको ओपेन एयर स्पाइडरको संस्करण हो तथापि यसमा कूपका अन्य विशेषताहरु पनि समेटिएको छ । यसको मूल्य २.२ मिलियन रहेको छ ।
९. जेन्भो टिएस वनः जेन्भो टिएस वनको मूल्य १.९ मिलियन रहेको छ । ८ यसमा सुपरचार्जर र टर्वो चार्जर दुबै फिचर रहेको छ । हेर्दा आर्कषक लुक्समा निर्मित यो कारको निर्माण डेनिस सुपर कार बिजनेसको डिजाइनको आधारमा गरिएको हो ।
१०. मेज्जान्ती इवान्ट्रा मिलिसेवल्ली ः लगभग २५ एकाईको स्लीम उत्पादनमा निर्माण गरिएको यो इटालियन कम्पनीले निर्माण गरेको एक सुन्दर विलासी कार हो । कार्वन फाइबरद्धारा यसलाई निर्माण गरिएको छ । यो एक रेस कार हो, केबल २.७ सेकेन्डमा यो ० बाट १०० मा पुग्छ । स्मरण रहोस् यो एक इटालीयन पावरफूल सडक कानून भएको कार हो र यसको मूल्य १.२ डलर रहेको छ ।